Paris Saint-Germain Awood Ma U Leeday Inay Kylian Mbappe Ku Qanciso Inuu Siijoogo Kooxda.
HomeHoryaalka FranceParis Saint-Germain awood ma u leeday inay Kylian Mbappe ku qanciso inuu siijoogo kooxda.
March 13, 2022 Horyaalka France, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay sameyn doonto isku daygii ugu dambeeyay oo ay ku qancineyso Kylian Mbappe inuu saxiixo qandaraas cusub oo waqti dheer ah oo faa’iido badan u leh kooxda reer France.
Heshiiska xiddiga heerka caalami ee dalka France ee PSG ayaa dhacaya dhamaadka bisha June, waxaana la aaminsan yahay in Real Madrid ay ku kalsoon tahay inay ku heli karto beeca xorta ah.
Warbixin dhawaan soo baxday ayaa lagu sheegay in Los Blancos ay filayso inay si rasmi ah u dhamaystirto heshiiska weeraryahankan dhamaadka usbuuca soo socda, iyadoo wadahadaladu ay sii xoogaysanayaan ka dib markii PSG ay ka reebtay Champions League kooxda reer Spain.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay L’Equipe , hogaamiyaasha Ligue 1 ayaa diyaar u ah inay sameeyaan isku daygii ugu dambeeyay ee ay ku sii heysanayaan, iyadoo kooxdu ay quus ka taagan tahay inay ka saxiixdo heshiis cusub ‘wax kasta oo ay ku kacayso’.
Mbappe ayaa lagu eedeeyay inuu ku fikiri lahaa inuu sii joogo Paris haddii kooxdu ay ku guuleysato Champions League xilli ciyaareedkan, laakiin waxa reebtay Real Madrid wareegii 16ka, iyadoo celcelis ahaan 3-2 looga badiyay.
23 jirkaan ayaa markale qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay heerka kooxda intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2021-22, isagoo dhaliyay 25 gool, waxaana loo diiwaan geliyay 17 caawin 35 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.